people Nepal » नेयमारविरुद्ध मुद्दा , ६ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने ! नेयमारविरुद्ध मुद्दा , ६ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने ! – people Nepal
नेयमारविरुद्ध मुद्दा , ६ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने !
स्पेनको अदालतले ब्राजिलियर सुपरस्टार फुटबल खेलाडी नेयमारविरुद्ध भ्रष्टाचार र धोकेबाजीको मुद्दालाई तीन न्यायाधीशको ठूलो इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यदि नेयमारविरुद्ध यी आरोप प्रमाणित भएमा उनलाई ४ देखि ६ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ । यदि यो सजाय पाएमा नेयमारले रोनाल्डो र मेस्सीलेजस्तो जरिवाना तिरेर छुट पाउनेछैनन् ।
यसअघि पोर्चुगलका सुपरस्टार फुटबलर क्रिष्टियानो रोनाल्डो र अर्जेन्टिनी सुपरस्टार फुटबलर लियोनेल मेस्सीमाथि पनि कर छलीको आरोप लागेको थियो । उनहिरुलाई २ वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएकोले उनीहरुले जरिवाना तिरेर जेल नबसी छुट पाएका थिए । तर नेयमारको हकमा भने यस्तो हुनेछेन । यहाँ २ वर्षभन्दा बढीको सजायमा जरिवाना तिरेर छुट पाइँदैन । ब्राजिलको सान्तोस क्लवबाट स्पेनको बार्सिलोना ट्रान्सफर हुँदा नेयमारले ट्रान्सफर मूल्य लुकाएको र कर छली गरेको आरोप छ ।
दावी गरिएअनुसार सान्तोसबाट बार्सिलोना आउँदा नेयमारलाई ८६.२ मिलियन युरोमा ट्रान्सफर गरिएको थियो । तर, नेयमार र क्लवले भने मात्रै ४० मिलियन युरोमा ट्रासफर भएको देखाएर कर छली गरेका थिए । यही कारण बार्सिलोनाका पूर्व अध्यक्ष जोसेफ मारिया पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । ठूलो बेन्चले कहिले सुनुवाइ सुरु गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन । नेयमारको तर्फबाट पनि यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । नेयमार अहिले बार्सिलोना छाडेर फ्रान्सको क्लव पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट खेलिरहेका छन् । एजेन्सी
त्रिविको विद्यार्थीले मंसिर दोश्रो साताबाट पायक पर्ने स्थानबाट परिक्षा दिन पाउने